Sonic Pi: dzidza zvirongwa uye makomputa paunenge uchigadzira mimhanzi | Linux Vakapindwa muropa
Sonic pi chirongwa chemagariro kwete software pachayo. Uye ndezvekuti yakwanisa kubatanidza kugona nehurongwa hwekudzidza. Kuwana avo vanoda kudzidza kuita purogiramu uye vari vanoda mimhanzi vanogona kunakidzwa nekugadzira zvavo nziyo pavanenge vachidzidzira kuronga vangangozviziva.
Nenzira iyi, Sonic Pi inoda kuunza vanhu vazhinji padhuze nekudzidza zvirongwa, kunyanya zvakagadzirirwa vana. Imwe nzira yekudzidza uye kukurudzira vana vazhinji kuti vapinde mumunda wekomputa, sezvazviri nhasi uye ichave iri ramangwana, zvichipiwa kuti ruzivo rwekugadzira ruzivo rwuri kuwedzera kukosha munzanga. Uye zvakare, iyo zvakare inobvumidza kukudziridza kugona kwemimhanzi panguva imwe chete.
Sonic Pi chirongwa cheMIT chakapihwa marezinesi, kubva open source, yemahara, uye izvo zviripo kune yako Linux distro. Chinenge chiridzwa chitsva chemimhanzi, sekutaura kwevagadziri vacho, kuti vawane huremu hwakaenzana pakati pemitemo mitatu inokosha
Zviri nyore kuitira kuti kunyange vana vagone kuishandisa.
Kunakidzwa saka unogona kunakidzwa nekutamba iwe uchidzidza, nekudaro uchishandisa mukurumbira gamification.
Iyo yakazara programmhu nharaunda yakatanga yakagadzirirwa kuongorora uye dzidzisa zvirongwa zvepurogiramu mukati mezvikoro kuburikidza nedanho rekugadzira mhere mitsva. Kunze kwekuve inokwezva sosi yenzvimbo dzedzidzo, asi zvakare chishandiso chakanaka chevanyori veindie, maartist maartist, nezvimwe.
Uye, kunyangwe hazvo dzidzo iri mbiru yepakati, chirongwa ichi chine nzira inosanganisirwa madomeni matatu akakosha:
Unyanzvi: kugona kuzviratidza nekunyora mimhanzi mitsva.
Technology: kukwanisa kuongorora zvine chekuita nezvehurongwa.
Dzidzo: kuratidza kuti kudzidza hakufanirwe kunge kuri chinhu chakaomarara uye chinofinha, asi chakavhurika uye chinokurudzira.
Naizvozvo, kana iwe uchida mimhanzi uye iwe zvakare uchida kudzidza kuronga, tora mukana uye shandisa Sonic Pi ...
Mamwe mashoko - Sonic Pi saiti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Sonic Pi: dzidza programming uye computer science paunenge uchigadzira mimhanzi